အနည်းငယ် Forex ကုန်သွယ်ဒဏ္ဍာရီ; ဆွေးနွေး debunked - အပိုင်း 1 | FXCC
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ - အနည်းငယ် Forex ကုန်သွယ်ဒဏ္ဍာရီ; ဆွေးနွေး debunked - အပိုင်း 1
အနည်းငယ် Forex ကုန်သွယ်ဒဏ္ဍာရီ; ဆွေးနွေး debunked - အပိုင်း 1
ကျနော်တို့မတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လက်လီ Forex ကုန်သွယ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းရှိမရှိကျနော်တို့လူမှုရေးတိရိစ္ဆာန်များနေနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကရှိယခုကြှနျုပျတို့နထေိုငျကျနော်တို့ဖိုရမ်များနှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာနည်းလမ်းများနောက်ဆုံးမှာရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်, ငါတို့ကုန်သွယ်အတွေးအခေါ်များမျှဝေဆွေးနွေးရန်။ ကျနော်တို့ဖိုရမ်များနှင့်အခြားဆွေးနွေးမှုနေရာများရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်ကျနော်တို့အချို့သောဘက်လိုက်မှုအပေါ်ယူသတိပြုပါပါလိမ့်မယ်။ အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦးပုံစံကိုနောက်ဆုံးမှာအချို့ဘာသာရပ်များဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောထင်; "ဒီအလုပ်လုပ်တယ်, ဒီမ, ဤသို့ပြု, ဒီမလုပ်ကြပါဘူး, ဤအာရုံစိုက်ကြောင်းလျစ်လျူရှု" ...
တကယ်တော့အဖြူနှင့်အတက်ဆင်းဤအုပ်စုသည်အလွန်နေရာအနှံ့နှင့်ဖြားယောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ထင်နှင့်အလုံလောက်အောင်ပါဝင်သူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခြို့သော authoritative မျှဝေသူများကဖျောင်းဖျကြသည်လျှင်အချိန်များတွင်, ထို့နောက်သင်အနက်ရောင်ယုံဘို့အပြစ်မှလွှတ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့အနေရင်တောင်အမြင်များ၏ဒီရေဆန့်ကျင်ရေကူးရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင် မှန်သောသူတို့ဆွေးနွေးငြင်းခုံအသစ်အနေ, အထူးသဖြင့်လျှင်, invective တစ် volley နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
entries ထွက်ပေါက်ထက်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်
အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များဖြစ်ကောင်းကြောင့်သူတို့စုံလင်သောသံပြိုင်အတွက် align အခါ, ရိုက်ထည့်ရန်ပြီးပြည့်စုံသော signal ကိုထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းတစ်ခုပေါင်းစပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်, သူတို့ရဲ့ entry ကိုမဟာဗျူဟာအပေါ် fixated လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့လာမယ့်ဖြစ်သွားမလဲ ဘယ်အချိန်မှာသင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်စျေးနှုန်းင်, သင်ကုန်သွယ်မှုနှုန်းအဘယ်အရာကိုစွန့်စားမှုယူပြီးတဲ့ထွက်ပေါက်, / ဘယ်မှာသင်သည်သင်၏ရပ်နားအားမရနေကြသည်သလဲ?
မည်သူမဆိုတစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်သေချာမဆိုဒီဂရီနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမညွှန်နိုင်သည်, သူကလမ်းမှတဆင့်ဝက်င်အခါပြိုင်ပွဲအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ထွက်ပေါက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြုံငုံကုန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအညီအမျှအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ထွက်ပေါက်နှင့်အတူအရေးပါမှုအတွက်ညီတူညီမျှအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ဝင်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဖို့ရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ထွက်ရမယ့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဖို့ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုကိုရရှိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ရလိမ့်မယ်, entry ကို signal ကိုထွက်ပေါက် signal ကိုမှ (ပြောင်းပြန်အတွက်) တူညီဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Forex စျေးကွက်ဿုံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါလျှင်အဘယ်သူမျှမနှင့်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြီးစျေးကွက်ဖြစ်မဟုတ်ဘူး, ကကျနော်တို့အလိုတော်မှာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကို turn off နိုင်ငွေကိုထိပုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဥပမာ, သမိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယားပေါ်တွင်ပြမကြာသေးမီပုံစံများ, အခြေခံနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်တရားစီရင်ပိုင်စေနိုင်သည်။ သူတို့အားကျိုးကြောင်းဆီလျော်စီရငျခကျြအပျေါအခွခေံကျနော်တို့ရှိရာစျေးနှုန်းကောက်ချက်ချနိုင်မည်ဖြစ်သင့် နိုင် အလတ်စားဝေါဟာရကိုဖို့တိုတောင်းသောကျော်ဦးဆောင်ပါစေ။ စျေးနှုန်းခေါင်းနှစ်လုံးသည်အဘယ်မှာရှိ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းပါကကျွန်တော်တို့ကိုမရရှိနိုင်သည့် tools များနှင့်သိပ္ပံပညာအပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင်, တစ်ဒင်္ဂါးပစ်ချဖြစ်မရှိပါ။
တစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မားအနိုင်ရရှိနှုန်းကိုသေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ဟာယူအသီးအသီးတဆယ်အရောင်းအထဲကခြောက်လအနိုင်ရလျှင်, အမြတ်အစွန်းသို့ဘာသာပြန်ဆိုသုံးဆုံးရှုံးနှင့်တစ်ခုပေါ်တွင်ပင်ကိုချိုးဖျက်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်များမှာ, ထို့နောက်ကျနော်တို့ထိထိရောက်ရောက်ရပ်တမှာအကောင်းဆုံးပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ , ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံရှုံးသည်။ ဖော်ပြထားအကြိမ်ပေါင်းများစွာသကဲ့သို့၎င်း, ပင် 50: 50 အနိုင်ရရှိ / အရှုံးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပါလျှင်တစ်ဦးချင်းစီအနိုင်ရကုန်သွယ်ရေးအပေါ်€ 200 ဥပမာ, ထိရောက်သောဖြစ်ပေမယ့်မှသာတစ်ဦးချင်းစီဆုံးရှုံးကုန်သွယ်ရေးအပေါ်€ 100 ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှင်ဘာဖြစ်နိုင်ခြေရဲ့အဘယ်အရာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်င်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များအတိုင်းငါတို့မဟာဗျူဟာတည်ဆောက်ရန်ရှိသည်။ တစ်ဦး Forex ငွေကြေးအဘို့နေ့ရက်ကာလ၌ 1% ရွှေ့ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုပုံမှန်ဖြစ်ပျက်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကသာတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်မည် ခန့်မှန်းချက်ပျောက်နေသည်သို့မဟုတ်ရိုက်နှက်အခြေခံပြက္ခဒိန်လွှတ်ပေးရန်, ဒါမှမဟုတ်နေရာအရပ်ယူပြီးဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ကနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်၏အခြေခံပေါ်မှာ။ ထို့ကြောင့်, တစ်ခုသာ 1% အန္တရာယ်အလုပ်သမားနေတုန်းကျနော်တို့တဦးတည်းငွေကြေးတစ်စုံကုန်သွယ်မှုလျှင် 0.5% ဈေးကွက်ပြောင်းရွှေ့ရာမှရရှိရန်, နေ့တိုင်းတစ်နေ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာလုပ်ကိုင်ရန်မျှော်အကောင်းမြင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြုအမူနှင့်အတူညှိအတွက်ကုန်သွယ်မှုရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်စျေးကွက်ကိုသူတို့လမ်းကြောင်းသစ်ထက်ပိုအထိသင်သိရထို့ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်လအတွင်း၌တစ်ဦး 3% ဈေးကွက်ပြောင်းရွှေ့သိသာပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့% 1.5 ရရှိရန်ကြိုးစားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်အရွယ်အစား 3% ဒီလောက်စွန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် ကြီးထွားမှု, သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ 1 ဒီလောက်စွန့်ထားရမည်: 1?
သာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်သိမ့်အဆင့်ကိုဖော်ပြပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကစာရင်းအင်းမျှသက်သေအထောက်အထား သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်တူညီလိမ့်မည်ဟုတည်ရှိ။